निधारमा १४ टाँका- तैपनि काम गरिरहेकै छन् यी ९५ वर्षीय अमेरिकी राष्ट्रपति !. Break n Links: Media for all - Across the globe
निधारमा १४ टाँका- तैपनि काम गरिरहेकै छन् यी ९५ वर्षीय अमेरिकी राष्ट्रपति !
बीएल- अन्तर्राष्ट्रिय ब्यूरो/एटलान्टा
१४ टाँका लगाएको निधार, रगत जमेको रातो आँखा र आँखामाथि ठूलो ब्याण्डेज । शीरमा एटलान्टा ब्रेभ्स बेसबल ह्याट । हातमा एक मेशिन लिएर काठ चिरिरहेको दृश्य ।
९५ वर्षको बूढो शरीर घिसार्दै श्रम गरिरहेका थिए उनी । त्यो पनि पैसा लिएर हैन, सित्तैमा । गरीवका लागि घर बनाइरहेका थिए उनी ।
यो फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टामा फोटो पोष्टका लागि फोटो शेसनका लागि बनाइएको स्युडो इभेन्ट पनि थिएन ।
उनी साँच्चै नै असिनपसिन हुदै काम गरिरहेका थिए, सामाजिक सेवा गरिरहेका थिए ।
उनी सामान्य श्रमिक हैनन्, एक असामान्य श्रमिक हुन् । ती ९५ वर्षीय श्रमिकको नाम हो- जिँम्मी कार्टर ।
यो नाम नै पर्याप्त छ, उनको परिचयका लागि थप विशेषण खोज्नै पर्दैन ।
महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको पूर्वराष्ट्रपति कार्टर । १९७७ देखि १९८१ सम्म अमेरिकाका राष्ट्रपति रहेका उनी ३९औं राष्ट्रपति हुन् अमेरिकामा । गत मंगलबार मात्र ९५ वर्ष लागेका उनी अमेरिकाकै सबैभन्दा लामो आयु भएका राष्ट्रपति बने ।
जर्जिया राज्यको प्लेनसमा रहेको एक सामान्य घरमा बस्छन् उनी श्रीमती रोजलिनका साथमा । आइतबार विहान घरमै लडेर घाइते भएका उनी अस्पताल लगिए । निधारमा चोट थियो, आँखामा रगत जमेर कालो भएको थियो । घाउमा १४ टाँका लगाइयो र घाउ छोप्न ब्यान्डेज ।
डाक्टरले आराम लिन भने । तर, उनी मानेनन् । उनले भने, मेरो केही समयपछि टेनेसीको नासभिल जानुपर्छ । त्यहाँ ह्याविट्याट फर हुम्यानिटीसँग मिलेर हामी २१ घर बनाइरहेका छौं । कम आय भएका विपन्नका लागि बनाइने ती घरमा मैले स्वयंसेवा गर्छु भनेर वाचा गरेको छु । त्यसैले मैले जानैपर्छ । '
चिकित्सकले भने, प्रेसिडेन्ट तपाई घाइते हुनुहुन्छ, १४ टाँका लगाइएको छ । तपाई ९५ वर्षको हुनुभयो । ...
कार्टरले विचैमा रोकेर भने, 'त्यसैले त मेरो लागि समय कम छ र मैले धेरै गर्नुछ । '
अनि उनले हात जोड्दै भने 'मलाई भगवानका लागि भए पनि जान दिनुहोस् ।'
उनको यो कुरा सुनेर चिकित्सकसँग भन्नलाई केही पनि बाँकि रहेन ।
कार्टर धन्यवाद भन्दै निस्किए ।
'मलाई अमेरिकाको राष्ट्रपति भएकोमा गर्व छ । तर, खुशीचाँहि यी घर बनाउँन सहयोग गर्न पाउँदा लागेको छ । मेरो लागि त्यो गर्व इतिहास हो भने यो खुशी चाँहि वर्तमान । अहिले म जिवित छु, त्यसैले वर्तमानमा बाँच्न चाहन्छु ।'
केही समयपछि उनी टेनेसीको नासभिलमा माथि वर्णन गरिएको दृश्यमा भेटिए । उनले भने, 'मेरो जीवनका कसैका लागि काम लागोस् । त्यही भएर म यहाँ आएँ ।'
उनले अगाडि थपे, 'मलाई अमेरिकाको राष्ट्रपति भएकोमा गर्व छ । तर, खुशीचाँहि यी घर बनाउँन सहयोग गर्न पाउँदा लागेको छ । मेरो लागि त्यो गर्व इतिहास हो भने यो खुशी चाँहि वर्तमान । अहिले म जिवित छु, त्यसैले वर्तमानमा बाँच्न चाहन्छु ।'
कार्टरको परोपकारी कामका लागि एक फाउण्डेसन बनाएका छन् । यसमार्फत् उनले अमेरिकामा मात्र हैन, विश्वका ६७ देशमा परोपकारी योजना सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
उनी ३५ वर्षदेखि ह्याविट्याट फर हुम्यानिटीका लागि स्वयसेवा र च्यारिटी गरिरहेका छन् । यही क्रममा अहिले न्युन आय भएका अमेरिकीका लागि टेनेसीको नासभिलमा २१ घर बनिरहेका छन् ।
जतिबेला ९५ वर्षीय अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति कार्टर निधारमा १४ टाँका लगाएर स्वयंसेवा गरिरहेका थिए, त्यतिबैलै बर्तमान राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प भने कार्टरकै पार्टी डमोक्रेटिक पार्टीलाई सत्तोसराप गरिरहेका थिए ।
कार्टर र ट्रम्प दुबै अमेरिकाका राष्ट्रपति- कार्टर ३८औं, ट्रम्प ४५औं । तर, त्यो बेलाको अमेरिका र यो बेलाको अमेरिकामा कति फरक । राष्ट्रपतिको व्यक्तित्व र शील स्वभावमा कति फरक ।
सफल हुनु एउटा कुरा हो तर असल हुनु धेरै कुरा हो । यी दुईमा त्यही फरक पाइन्छ ।
कार्टर इतिहास हुन् ट्रम्प वर्तमान । अहिलेको अमेरिकामा कार्टर जस्तो भएर बाँच्न गाह्रो छ, त्यसैले ट्रम्पजस्तै भएर बाँच्ने अभ्यास जारी छ । समाजशाश्त्रले भन्ने अमेरिकी जीवनको पाराडाइम सिफ्ट पनि यही नै हो ।
फेरि लडे जिमी कार्टर, भर्ना भए अस्पताल
ट्रम्पलाई अर्को संकट, इराकले राख्न नदिने भयो अमेरिकी सेना
ब्राजिलको बेलो हरिजोन्ट शहरमा विमान दुर्घटना,तीन जनाको मृत्यु
सिरियाबाट फर्कने अमेरिकी सेना 'स्लामिक स्टेट'को पुनरुत्थानविरुद्ध खटाइने
अमेरिकाको टेक्सस ड्यालसमा भीषण टोरनेडो, बस्ती अन्धकारमय
बोलिभियामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन: मोरालेसको पहिलो चरणमा अग्रता
चिलीमा कर्फ्यू, लुटेराहरूले कपडा कारखानामा आगो लगाइदिँदा पाँचजनाको मृत्यु
अमेरिकामा अण्डरकभर एफबीआई एजेन्टको फन्दामा फसे अर्का एक नेपाली
चिलीको सान्टियागो राज्यमा संकटकालको घोषणा